Qof kasta carrabka waxa uu ka hadlayaa oo ku saabsan codsiyada badan oo Lugood. Bandhigaan labada telefoonka gacanta iyo kombiyuutarka, codsiyada Lugood tiro badan yihiin adduunka koraya gaar ahaan beerta tiknoolajiyadda macluumaadka.
iTtunes siiyaan mid ka mid ah hababka ugu fiican ee la abuurayo hayaan kooban naga sida farriimaha, music, iyo codsiyada. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay dib u ma ilaa sawiro ama content iibsaday ka app dukaanka Lugood. Intaas waxaa sii dheer, synching la kombiyuutarka via qalab USB ah ka dhigaysa nidaamka yar adag. Interface user-friendly ah Lugood tagaa waddo dheer in la hubiyo in macaamiisha ay ka heli ugu wanaagsan ee reer adeeggan.
Isbeddellada teknoolajiyada telefoonka gacanta si degdeg ah ay bedelaan sida aynu u aragno wax. Si kastaba ha ahaatee, isbeddellada waxan la caqabado fara badan. Mararka qaarkood Lugood dafiri karto in xogta gurmad ay sabab u tahay dhowr reasons.These ka mid ah:
Qalab USB aan si sax ah ku xidhan kombiyuutarka keenaya syncing ma inay qabsoonto.
Musuqmaasuqa ee files u baahan in la taageeray sababo la xiriira arxandarada ah barnaamijyada kale.
Isticmaalka version ah dhacsan ee Lugood ma ay taageerayaan telefoonka.
Ka dib markii hab khaldan markii uu isku dayay in ay dib u up.
Weligaa ma isku dayday in ay gurmad iPhone xogta adiga oo isticmaalaya Lugood iyo helay fariimo sida "iPhone diiday codsi" ama "raad raac ku guuldareystay ''. Halkan waxa ku jira saddex siyaabood ugu badan ee aad isticmaali karto si aad u badbaadiyo.
Ku rakib nooca ugu dambeeya ee Lugood
Delete entries hore gurmad
Bilaash boos on your computer oo ay isticmaalaan qalab USB kala duwan.
Ku rakib nooca ugu dambeeya ee Lugood.
IPhone kala duwan u isticmaalaan nooc oo kala duwan oo ah Lugood. Version ayaa looga faa'iideysan by iPhone 4 laga yaabaa in isku mid ma noqon sidii looga baahan yahay nidaamka qalliinka iPhone 6. iPhone ayaa darawallada gaar ah version in si gaar ah iPhone. CUSBOONAYSIINTA ama ku rakibidda version cusub la jaan qaada telefoonka, siisaa inay helaan xisaabtaada Lugood iyo xog gurmad ee kombiyuutarka.
Takhalusid Entries Previous kaabta
Lugood Ma laga yaabaa in ay awoodaan in ay aqoonsadaan gurmad ah in dhaawac barnaamijka, yaadan. Waxa aan sidoo kale xaqiijin karo gurmad ah oo la kaydiyaa iyadoo la isticmaalayo hab qaldan. Si aad u tirtirto entries hore, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tag menu Lugood ah.
Riix door bidaan.
Click iyo tirtirto faylka raad raac ah oo xiiso.
Bilaash ilaa Space aad Computer
Lugood isticmaalaan meel computer ee macluumaadka loo baahan yahay in loo isticmaalo mustaqbalka taageerto kor. Computer waxa uu leeyahay tiro badan oo ah meel bannaan. Mararka qaarkood meel this waxaa loo isticmaalaa si loogu kaydsado files iyo fayl ay ku jiraan macluumaadka. Haddii tani ay tahay meel bannaan oo buuxda, Lugood ma awoodi doonaan in ay dib u kor xogta iyo haddii ay taasi ku jira qaar ka mid ah ay tahay in la tirtiro, si bilaash ah meesha bannaan ee.
Haddii kale haddaad kor ku xusan saddex kiis oo ku fashilmaan, waxaad eegi kartaa xaalad aad cable USB maadaama ay tahay mid ka mid ah, in syncs computer la telefoonka. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka ugu fiican waa iyada oo la isticmaalayo ee app desktop loo yaqaan Wondershare MobileGo .
Wondershare MobileGo waa aalad fudud qalabka Android taas oo ka caawisa in ay si waxtar leh aad u waafajinta PC in telefoonka gacanta. Waxaa sidaas bixisaa xal aan xuduud lahayn u taageerto kor u multimedia files, xiriirada, fariimaha, goobaha, ringtones iyo is-app. Waa aalad aad u faa'iido badan u isticmaala daryeela badan oo ku saabsan ay ka kooban mobile gaar ahaan haddii ay tahay la xiriira ganacsiga ama si qarsoodi ah.
Wondershare MobileGo awood u ka mid in ay dib u kor xog muhiim ah ka qalabka Android in computer si xaq click hal. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in effortlessly soo ceshano faylasha iyo xogta xoojiyaa. Si aad dib u qalabka Android aad by isticmaalka Wondershare MobileGo , raac talaabooyinka hoos ku sharraxan:
Orod MobileGo on your computer. Connect qalabka aad via cable USB bixiyo ama Wi-Fi.
In uu furmo suuqa hoose, guji "raad raac"
Marka uu furmo suuqa gurmad u muuqataa, uncheck ka kooban aadan rabin inaad dib u sidii ay u doorteen alaabta oo dhan by default.
Dooro badbaadin waddo ee files xoojiyaa, ka dibna riix dib u dhamayso.
Wondershare MobileGo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo soo celiyo qalabka Android ka dib. Waxaa loo isticmaali karaa ilaa iyo dib loo soo celiyo soo diyaariyeen ballaaran oo ka kooban sida music, videos, abuse wac, SMS, jadwalka, xiriirada iyo xogta barnaamijyadooda. Si aad u soo celiyaan qalabka Android ka dib, raac tallaabooyinka fudud ee hoos ku xusan:
Orod MobileGo oo lagu xiro qalabka Android aad.
Connect qalab aad si aad u computer ka badan hal Wi-Fi ama cable USB
Tag xirmada qalabka super uu furmo suuqa hoose, in ay lagama maarmaan ah qaybta click "celin"
Marka uu furmo suuqa celin u muuqataa, dooro files gurmad in aad rabto in dib loo soo celiyo.
Ugu geeska hoose ee saxda ah, sax ah oo ku saabsan xogta cad ka hor soo celinta ama doorashada aad keligaa baxdo kartaa haddii aad rabto in aad sii xogta jira.
Ugu geeska hoose ee midig, guji "celin" oo heli doona waxa ku jira ay dib u soo qalab aad.
Inta lagu guda jiro habka soo celiyo, qalabka waa in aan la ineysan ka computer sida tan carqaladeeyo nidaamka.
> Resource > macruufka Data Recovery > Sida loo dayactir iPhone karin kaabta in Lugood.